कास्कीमा बाघको आक्रमणबाट आज दुई जना घाइते भएका छन् । रुपा गाउँपालिका–७ धारापानी बस्ने ३४ वर्षीय तुलबहादुर गुरुङ र ३२ वर्षीय मीलन गुरुङ बाघको आक्रमबाट घाइते भएको गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराले जनाएको छ ।
तुलबहादुर बिहान आफ्नै बारीमा घाँस काट्न जाँदा अचानक बाघ देखेपछि भाग्ने क्रममा पछाडिबाट चिथोरेर बाघले घाइते बनाएको प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामु अर्यालले जानकारी दिए । स्थानीयवासीले सो घटना देखेर बाघको प्रतिकार गर्ने क्रममा सोही ठाउँ बस्ने ३२ वर्षीय मीलन गुरुङसमेत टाउकामा चोट लागेर घाइते भएका छन् । उनीहरु दुवैको भिरचोक स्वास्थ्य चौकीमा उपचार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । स्थानीयवासीको प्रतिकारका क्रममा बाघको घटनास्थलमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
संसद बैठक अवरोधको नीतिबारे छलफल गर्दै एमाले नेताहरु
१ सय ८ स्थानीय तहको मतपरिणाम सार्वजनिक हुँदा कांग्रेस पहिलो, कुन पार्टीले कति जिते ?
युक्रेनमा लामो युद्धको तयारीमा पुटिन
सुनको मूल्य घट्यो, कतिमा हुँदै छ कारोबार ?
केशव स्थापितलाई निर्वाचन आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण
मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै, यस्ता छन् एजेण्डा